Ukufumana iindleko ezingahlawulwanga nge-inshurensi yamatyala | Ezezimali
UJoseph kwakhona | | Uqoqosho ngokubanzi, Iimveliso zezemali, IInshshu
Enye yeengxaki ezinkulu abajamelana nazo oosomashishini abancinci nabaphakathi kukuzimisela kwabo ukufumana ubunzima kusilelo lweshishini nakubudlelwane bobuchwephesha. Le meko, engafunekiyo kunye neziphumo ezingalindelekanga, inokukhokelela kwi imali ekhoyo yeenkampani incitshiswe ngendlela eyingozi.
Esinye sezisombululo zokuthintela le ngxaki sivela kwi-inshurensi yamatyala. Kodwa yintoni ngokwenene le mveliso? Yenye yezona ndlela zisebenzayo zokuzikhusela umngcipheko wokungaqokelelwa kwaye iimeko ezinobunzima ngakumbi, ezinje ngokuhlawula amatyala eshishini. Ukwenza ikhontrakthi kule mveliso kubonelela iingcali okanye oosomashishini ngesigubungelo esinamandla sokujongana nobugwenxa obunokwenzeka kubathengi babo. Ngokwe-inshurensi Coface, ixabiso eliphambili I-inshurensi yemboleko Kungenxa yokuba yenza ukuba kufumaneke kubaxumi bayo iziseko ezingxamisekileyo zokubanceda ukulawula ukuqokelelwa kwee-invoyisi ezingahlawulwanga, ngakumbi kumazwe anomngcipheko omkhulu.
Ngayiphi na imeko, enye yeenjongo eziphambili ze-inshurensi yamatyala ngu Ukuqokelelwa kwesiqinisekiso yemisebenzi eqhutywa phakathi kweenkampani. Ayilolize, iingxelo zecandelo ezahlukeneyo zibonisa ukuba ukuqesha le migaqo-nkqubo amathuba okuqokelela ii-invoyisi aphezulu. Oku kusebenza kuzo zombini iinkqubo zesizwe kunye nezo zenziwa ngaphandle kwemida yethu, ebaluleke kakhulu kwiinkampani ezithumela kwamanye amazwe.
1 I-inshurensi yemboleko: ukuqokelelwa kwengqokelela
2 Uncedo ekukhetheni abathengi
I-inshurensi yemboleko: ukuqokelelwa kwengqokelela
Nangona le mveliso yayide ibe yiminyaka embalwa edlulileyo isisikhuselo semali ngokuchasene nokungabinamali kwabantu besithathu, le meko itshintshile ukubonelela ngeenzuzo ezinkulu kubathengi. Ke, sisixhobo esinamandla sokwenza nyusa ityala yenkampani okanye yeshishini. Yintoni ephunyeziweyo ngale ntsebenzo? Ewe, into elula njengokuqinisekisa ukukhula kweshishini.
I-inshurensi yetyala, kwelinye icala, inentshukumo ephindwe kabini eluncedo kakhulu kubasebenzisi bale mveliso ibaluleke kakhulu.Kwelinye icala, umonakalo onokuthi uveliswe ngokunciphisa ukuthengiswa kweshishini kuncitshiswe kakhulu. Kwaye kwelinye, yenziwa njenge amanyathelo othintelo iyasebenza ngokwenyani ngokuchasene neemeko ezinqwenelwa ngoosomashishini ezinje ngezi sixoxe ngazo kweli nqaku.
Uncedo ekukhetheni abathengi
Esi sicwangciso-qhinga solawulo siyenzeka, kungekuphela nje kuthotho lwezenzo zokuqokelela ii-invoyisi kwabo basilelayo, kodwa ikwabonelela ngokubanzi Ulwazi lweprofayile thaca ngabathengi, kokubini kusekwe kunye nokubakho. Ngale ndlela, amacebo okucoca ulwelo anokumiliselwa ukuze kuphuhliswe umgaqo-nkqubo ochanekileyo ekutsaleni ishishini.
Olu hlobo lweinshurensi alithandabuzeki ukuba sisixhobo esiluncedo kakhulu sokungena kwishishini elitsha okanye kwiimarike, ngaphandle kokuthatha umngcipheko omninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ukufumana ii-invoyisi ezingahlawulwanga nge-inshurensi yamatyala
Uyonga njani imali kwiifizi?